Ezahlukeneyo FS2004 - Rikoooo
Zeppelin NT V1.0 for FS2004 HOT umxokozelo
Ukopisho: 12 950
Yobungakanani: 27.3 MB
Kuba FSX lobeko ehambelanayo cofa hereThe Zeppelin NT (New Technology Zeppelin) na uhlobo ivele eyakhelwe yinkampani waseJamani Zeppelin Luftschifftechnik GmbH kwi 1990s, Friedrichshafen.This add-on yayisakhiwa FSDS3.5. Iimpawu ezi multi naseLode-ongumzekelo iimposiso for FSX. operable eliphelele vi ... Funda ngokugqithisileyo
ehambelanayo Ngokuba FS2004
umbhali Thomas Roehl, Joerg Hammes kunye Stefan Medelnik
Igama lefayile zeppelin_nt_v1.0_for_fs2004.zip
I-Fletcher ye-Aerospace FU24 950 Series FSX & P3D - v3
I-F-8 iVrock Crusader FSX & P3D - v2
I-Lockheed PV-2 iHarpoon-I-Gold Release FSX ne-P3D
I-Pilatus PC-6C I-H2 I-Porter FSX ne-P3D
I-Lockheed PV-2 I-Harpoon Fire Tanker Iphakheji FSX & P3D
I-Boeing KC-135 I-Package Stratotanker I-FSX ne-P3D-v1.0
I-Howard 350 I-FSX I-FSX yamaNtu kunye ne-P3D
I-Howard 500 FSX Indalo ye-FSX kunye ne-P3D-v1.1
Ndafumana isaziso virus?
Kuyinto eqhelekileyo ukuba ezinye iifayili (exe) kwi Rikoooo ukuze ulumkiswe abathile inkqubo anti-virus nokuba sethubeni sifo. Okokuqala musani ukuphakuzela, kufuneka wazi apho akuzange kubekho intsholongwane enye Rikoooo ukususela ekudalweni kwayo (iminyaka engaphezu kwama 12). Enyanisweni, oku kubizwa ngokuba okungamanga, ulwazi olungaphezulu apha